Found 48 ~ Mateu, Mako, Ruka, John, Hechos, VaRoma, 1 VaKorinte, 2 VaKorinte, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
Jesu akati kumutungamiri wezana, “Chienda zvako ngazviitike sokutenda kwako.” Muranda uya akabva apora panguva iyoyo.
Akabata maziso avo akati, “Ngazviitwe kwamuri sokutenda kwenyu.” Maziso avo akabva azaruka.
Ipapo Jesu akati, “Ndinokutendai Baba, Tenzi wedenga napasi kuti makavanza zvinhu izvi kuna vakachenjera navanonzwisisa mukazvizivisa kuvana vaduku.
Ruombeko rwaJohani rwakabvepi, kudenga here kana kuvanhu?” Vakataurirana vachiti, “Kana tikati rwakabva kudenga, iye achati kwatiri ko makaregerei kutenda kwaari?
Nokuti Johani akakuunzirai gwara roururami asi imi hamuna kutenda maari asi vateresi nepfambi vakatenda maari. Kunyange pamakazviona hamuna kutendeuka muchitenda kwaari.
Vazhinji vachakoromoka pakutenda kwavo. Vachacherana vachivengana.
Ipapo vakataurirana pachavo vachiti, “Kana tikati, ‘Rwakabva kudenga;’ achati, ‘Ko makaregerei kutenda kwaari?’
Asi pavakanzwa kuti Jesu mupenyu uye kuti aonekwa naye havana kutenda.
Pashure Jesu akazviratidza kuna vane gumi nomumwechete vari pakudya. Akavashora pamusana pokusatenda kwavo napamusana poukukutu hwomoyo yavo nokuti havana kutenda vakanga vamuona mushure mokumuka kwake.
“Chinzwa, uchava chimumumu, usingagoni kutaura kusvikira musi wazvichaitika, nokuti hauna kutenda zvandakuudza, izvo zvichazoitika nenguva yazvo.”
Vakambokurukurirana pachavo vachiti, “Kana tikati rwakabva kudenga iye achati ko makaregererei kutenda kwaari.
Jesu ndokuti kwavari, “Oo, inga muri mazirema chaiwo avanhu! Munechinono chaicho kutenda zvose zvakataurwa navaporofita.
Nokudaro vakabvisa ibwe riya. Jesu akatarisa kudenga akati, “Baba, ndinokutendai nokuti mandinzwa.
Kunyange zvazvo akaita zviratidzo zvizhinji pamberi pavo asi havana kutenda maari.
Naizvozvo havana kugona kutenda nokuti Isaya anotizve,
Jesu akavapindura achiti, “Zvino mava kutenda nhai?
Zvino vangadaidze sei kwaari ivo vasina kutenda maari? Uye vachatenda sei maari iye vasina kumbonzwa nezvake? Uye vanganzwe sei ivo vasina muparidzi.
1 VaKorinte 10:16
Mukombe wokutenda watinokomborera hakusi kunwidzana ropa raKristu here. Ko chingwa chatinomedura hakusi kudyidzana muviri waKristu here?
1 VaKorinte 14:17
Unogona kutenda zvakanakisisa zvako asi mumwe wako asina chaanobatsirwa nacho.
Hatisi kukuudzai zvamunofanira kutenda asi tinoshanda pamwechete kuti muve norufaro nokuda kokuti mumire makasimba muchitendero chenyu.
Chiri chose chamunoita, kungave kutaura kana kuita, zviitei muzita raTenzi Jesu, muchitsvitsirwa naye kutenda kwenyu kuna Baba.
siku nesikati tichibva tanyatsonamatawo kuti tizoonana uso nouso tichizokupai zvimwe zvamusina mukutenda kwenyu.
kuti vose vapihwe mhosva vasina kutenda chokwadi vachifarira zvisina kururama.
1 Timoti 2:1
Nokudaro pokutanga ndinokurudzira kuti mikumbiro neminamato nezvichemo nokutenda zviitirwe vanhu vose vanoti:
asi mururami wangu achararama nokutenda asi akadzokera shure handimufariri.”
Mutemo wake ndouya wokuti: Tinofanira kutenda muzita roMwanakomana wake Jesu Kristu uye kudanana sokutiudza kwaakaita.
Zvisikwa zviya zvipenyu pazvaipa mbiri norukudzo nokutenda kuna akanga agare pachigaro choumambo, iye anoramba aripo narini narini,
vachiti, “Tinokutendai Tenzi Mwari Samasimbaose. Imi muripo, makanga muripo kuti makatora ukuru hwenyu mukatangisa kutonga.